Mogadishu Journal » Xajka Waajibaadka iyo Sharuudihiisa Maxaa Qofka Gudanayo Xajka Looga Baahan Yahay?
Xajka waa rukniga shanaad ee ay diinta Islaamku ku dhisan tahay, waana waajib uu Ilaahay faray dhammaan ummadda Islaamka, gaar ahaan qofkii awoodi kara ayaa waxaa laga doonayaa in ugu yaraan uu hal mar oo kaliya soo xajiyo, haddii uu labo ama ka badan xajiyana waa qofka awooddiisa oo waa u bannaan tahay.
Waxaa Xajka la waajib yeelay sannadkii sagaalaad ee Hijriyada, wuxuuna Rasuulku ku tilmaamay in xajka abaalmarintiisa ay tahay Jano.
Rasuulka (CSW) ayaa waxaa la weydiiyay camalka ugu fadli badan kolkaasuu yiri: “In Ilaahay iyo Rasuulkiisa (CSW) la rumeeyo” maxaa ku xiga ayaa la weydiiyay, wuxuu yiri:” “Jihaad Ilaahay dartii loo galay”, kabacdi maxaa ku sii xiga ayaa la weydiiyay, waxaa uu yiri: “Xaj Baari ah”.
Abuu-Hureyra ayaa waxa laga wariyay inuu yiri “Xujaayda iyo dadka cimrada gudanaayo waa wafdi Ilaahay, ducadooda la ajiibo, haddii ay Ilaahay dembi dhaaf weydiistaana waa laga aqbalaa oo loo dambi dhaafaa”.
Bilaha xajka la guto waa Shuwaal (Soonfur), Dulqacda (Sidataal) iyo tobanka beri (maalmood) ee ugu horeysa bisha dulxaj (Arrafo).
WAXA LOOGA BAAHAN YAHAY QOFKA GUDANAYA XAJKA.
Qofka xajka gudanaaya waxaa looga baahan yahay arrimaha soo socda:-
2) Inuu caqli qabo oo aana waalneyn.
3) Inuu qaangaar yahay.
4) Inuu xor yahay
5) Inuu awoodi karo (xoolo iyo jir ahaanba)
6) Haddii ay dumar tahay waa inuu maxram la socdo.
SHAN MEELOOD AYAA LAGA XIRMANAYAA XAJKA:
3) Qarnul-manaasil oo ay reer Najad ka xirmadaan
4) Yalam-lam oo ay reer Yamaneed iyo dadka Soomaaliya ka taga ay ka xirmadaan.
5) Daatu-ciraq oo ay reer Ciraaq ka xirmadaan.
Waa karaahi inuu qofku xirmado xajka isaga oo aan gaarin shantaas meelood ee kor ku xusan ee uu kaga xirmanayo xajka maxaa yeelay Nabiga (CSW) ayaa waqtiyeeyay.
SADDEX NOOC AYAA XAJKA LOO GUTAA:-
1) (Tama-tuc) oo ah inuu qofku xirmado Cumrada bilaha xajka gaar ahaan ka bacdi marka bisha Shuwaal soo gasho kadibna ka firaaqooba (ka baxo) cumradii oo uu xirmado xajkii.
2) (Xiriirin) oo ah inuu is raaciyo cimrada iyo xajka labadooda oo wada xirmado.
3) (Kaliyeelid) oo ah inuu qofka xirmado xajka oo kaliya.
Culimada Islaamka badidoodu waxay qabaan inuu qofku dooran karo kii uu rabo saddaxdaasi nooc, waxaa la isku khilaafay kan ugu fadli badan saddexda nooc waxaase la door biday Tamatuca kaasi oo uu Nabigu (CSW) ku booriyay asxaabtiisa isaguna uu sameeyay.
SIDA LOO GUTO XAJKA
Ugu horeyn waxaa loo baahan yahay inuu qofku xirmado xajka, oo ah maalinta siddeedaad ee bisha Dul-xaj (Arrafo) marka uu xirmanayana waxaa looga baahan yahay:
1) In uu qubeysto (mayrto) is catariyo.
2) In uu xirto dhar cadcad, gabadhuna ay xirato wixii ay rabto laakiin shardi waxaa ah ineysan is qurxinin.
3) Inuu tukado salaadii faralka ahayd haddii ay tahay waqtigeedi si uu markaas ka bacdi u xirmado, haddii aanay jirin salaad farad ahi waxa uu tukanayaa labo rakco oo sunna ah oo aan ahayn sunihii ixraamka, kadib wuxuu la imaanayaa talbiyadii xajka (Labbeykallaahumma Labbeyk, Labbeyka laa shariika laka labbeyk).
4) Xaajigu wuxuu u baxayaa Minaa wuxuuna ku tukanayaa duhur, casar, maqrib, cishe iyo subax wuxuuna qasrinayaa (gaabinayaa) salaadaha kuwa la qasrin karo (Duhurka, Casarka iyo Cishaha) isaga oo jamcinaaya (kulminaya).
5) Wuxuu Xaajigu istaagayaa Carafa waana maalinta sagaalaad ee Bisha Dul-xaj. Waa rukni muhiima istaagidda la istaago Carafo ducada la duceystaana aad bay u kheyr badan tahay qofka aanan xaajiga aheyn waxaa sunne ah inuu soomo.
6) In uu ku baryo Musdalifa marka laga yimaado Carafa waana qorax dhaca kadib, wuxuuna ku tukanayaa maqrib iyo cishaa. marka uu tukado salaada subax kabacdi wuxuu u baxayaa Mash-caril Xaraam.
7) Xaajigu wuxuu aadayaa Minaa waxaana la tuuraya Jamratul-caqaba todaba goor kabacdina waxaa la qalayaa neefkii hadyiga ahaa.
8) Waxaa la xiirayaa ama la gaabinayaa timaha haddii uu nin yahay. kadibna wuxuu ku dawaafayaa Kacbada waana dawaaful ifaada.
9) Sacyigii (orodkii) ayuu la imaanayaa haddii aanu hore u sameyn, markaa kadib ayaa waxaa xaajiga u xalaaloobaya wixii ka xaaraam ahaa oo dhan, kadibna xaajigu wuxuu sii joogayaa maalmaha ayaamu-Tashriiqa eek ala ah (11, 12, iyo 13aad).
10) Minaa, wuxuu ku tuurayaa saddex tuurimaad oo mid kastaaba tahay toddoba tuuryo oo isku xiga isaga oo qofku takbiiranayo tuuryo kasta oo uu tuuro.
11) Qofku ama xaajigu wuxuu sameynayaa Dawaafulwidaac. Kadibna wuxuu soo siyaaranayaa Masjidka Rasuulka (CSW).
WAXYAABAHA QOFKA XAAJIGA AH KA XAARAAN AH.
Qofka Xaajiga ah inta lagu guda jiro Waajibaadka gudashada Xajka waxaa ka mamnuuc ah:-
1) Inuu la yimaado jimaac ama galmo.
3) inuu isticmaalo udug marka uu xirmado kabacdi .
6) in la suubiyo caqdi – guur.
WAXYAABAHA SUNNAHA U AH XAJKA:
1) Waxaa sunne ah inuu qofku kali yeelo xajka oo uu xajka iyo cimrada kala saaro, waxaana la sii sunneeyaa in uu xajka hormariyo.
2) Waxaa sunne ah in qofka xajka gudanaya uu ku dhawaaqo Talbiihda ama digriga la qaado marka xajka la gudanayo.
3) Waxaa sunne ah in qofka xaajiga ah uu sameeyo dawaafka ama ku wareego kabcada marka uu xajka soo galaba (Daafu quduum).
4) Waxaa sunne ah in qofka xajka gudanaya uu habeen ku baryo ama seexdo mustalifa.
5) Waxaa sunne ah in qofka xaajiga uu laba ragcadood oo sunne ah ku tukado maqaamka Nabi ibraahim markuu dawaafka dhammeeyo kadib.
6) Waa sunne inuu habeen ku baryo ama ku nagaado Muna.
7) Waa sunne inuu sameeyo dawaaf nabadgalyeyn ah markuu baxayo.
WAXA KA REEBAN XAAJIGA:
Qofka xajka gudanaya ee ragga ah waxaa ka reeban inuu qaato maro tolan oo godaysan, sida surwaal, shaar, macawis, nigis, garan, Sag-sagaan(sharabaado), koofiyad IWM.
Waxaa laga doonayaa inuu qaato Labo Go’ mid uu hoosta ka guntado iyo mid uu kor ka qaato waana inay ahaadaan labo go’ oo cadcad iyo kabo aan buud ahayn.
Ilaahay inta xajisay xajkooda haka aqbalo inta aan awoodin ee niyadda ka jecel in ay xajiyaana Ilaahay ha u fududeeyo, dambigeena iyo dembi waalidkeena Alle ha dhaafo, ummadda Soomaaliyeedna qalbiyadooda Alle ha isku dumo, dalkeena nabad iyo islaax alle haka dhaliyo. Aamiin…aamiin